Izao tokoa angamba no tonga amin’ilay fomba fijery misy lesona tsara sy ratsy azo alaina avokoa ao anatin’ny zava-mitranga rehetra. Satria ny firosoana amin’ny fanakatonana sisin-tany sy seranan-tsambo ary fanihibohana ireo ahiana ho marary ao amin’ny fireneny avy izao no maha seriny izao tontolo izao dia mazava ho azy fa tsy hisy ihany koa ny atao hoe fitsaboan-tena any ivelany raha tonga ny sanatria. Na hatramin’ireo mpitondra sy mpanam-bola afrikanina izay zatra mitsabo tena any eoropa sy etazonia aza dia ho voatery ao amin’ny fireneny ihany no hitsabo ny tenany raha sendra marary satria miato avokoa ny zotram-piaramanidina sy sambo amina firenena maro maneran-tany. Mety mba ho maromaro amin’izay, araka izany, ireo mpitondra afrikanina mba hampandroso ny hopitaly na ny fitsaboana sy fandraisana marary ao amin’ny fireneny; ary hahatoky hitsabo tena ao amin’ny fireneny miaraka amin’ny mpiray tanindrazana aminy. Asa aloha ny eto Madagasikara raha mba hanao ahoana.